Ny fampiharana fakantsary haingam-pandeha 5 tsara indrindra ho an'ny Android | Androidsis
Na eo aza ny laza ratsy ananany, radar no eny an-dalana noho ny antony tsara. Mikatsaka ny hampahatsiahy antsika izy ireo fa ilaina ny manaja ny fetran'ny hafainganana. Ankoatry ny mitady hisorohana ny loza mahatsiravina hitranga eny an-dalana, farafaharatsiny ireo izay ny hafainganam-pandeha no antony. Na izany aza, angamba noho ny hadisoana dia mandeha haingana kokoa noho ny navela isika ary ny radara no mahatsikaritra azy.
Amin'izay dia azo inoana fa handoa onitra isika. Zavatra tsy tadiavin'ny olona, ​​satria misy vidiny matetika tafahoatra. Ka, manana fanampiana tsara amin'ny finday Android izahay. Misy ny rindranasa izay mampitandrina antsika ny amin'ny fisian'ny radara izy ireo.
Eto izahay dia manangona ny sasany amin'ireo fampiharana fakan-tsary haingam-pandeha tsara indrindra ho an'ny Android. Misaotra azy ireo isika afaka mamantatra ireo radara eny an-dàlana, raikitra ny ankamaroany. Araka izany, tsy tokony handoa lamandy mihoatra ny indray mandeha isika. Noho izany izy ireo dia mety ho tena ilaina. Vonona ny hihaona amin'izy ireo?
3 Radera voamboatra sy finday
Izy io dia iray amin'ireo rindrambaiko findramana radara malaza indrindra amin'ny Android. Mampiseho amintsika ny fampitandremana amin'ny fotoana tena izy momba ny radara mihoatra ny 60.000 manerana an'izao tontolo izao. Izy io dia manana tahiry goavambe lehibe izay manitatra tsy an-kijanona ary maharaka hatrany hatrany. Ka manao asa lehibe amin'izany izy ireo. Satria afaka mampiasa azy io koa isika raha manao dia lavitra miaraka amin'ny fiara mankany amin'ny firenen-kafa.
Maimaimpoana tanteraka ny fampidinana an'ity rindranasa ity amin'ny Android. Ho fanampin'izay, tsy misy fividianana na dokam-barotra ao anatiny.
Detector Radar - CamSam
Fampiharana iray hafa izay mankafy ny lazan'ny mpampiasa Android. Ankoatr'izay dia iray amin'ireo tranainy indrindra amin'ny lisitra izy io, izay havaozina matetika. Manana a tahiry lehibe misy radara. Ka ampandrenesina antsika amin'ny fotoana rehetra ny radara izay mety ho hitantsika eny an-dalana. Ankoatr'izay, ny iray amin'ireo tombony lehibe dia izany azontsika atao ny mampiasa azy any aoriana. Io dia ahafahantsika mahita ny fetran'ny hafainganana ary mampitandrina antsika amin'ny fakantsary haingam-pandeha amin'ny alàlan'ny Google Maps na mpitety hafa.
Maimaimpoana ny fampidinana ny fampiharana amin'ny Android. Na izany aza, mahita doka ao anatiny izahay. Soa ihany fa matetika tsy dia manafika izy ireo.
Radera voamboatra sy finday
Iray amin'ireo safidy tsara indrindra ampiasaina any Espana. Misaotra an'ity fampiharana ity dia afaka manana vaovao momba ireo radara rehetra eny an-dalambe izahay. Inona koa, tena vaovao be foana, Ka raha apetraka ny vaovao dia esorina ny sasany na afindra izy ireo dia ho fantatsika. Ho fanampin'izay, azontsika atao Ampiasao ao aoriana ilay app miaraka amin'ny mpitety tranonkala tianao indrindra. Rehefa manatona radara isika dia misy fampandrenesana halefa.
Maimaimpoana ny fampidinana ny fampiharana amin'ny Android, na dia mahita fividianana ao anatiny aza isika.
Radar raikitra sy finday
Safidy fanta-daza izay misy vondrom-piarahamonina marobe misy mpampiasa an-tapitrisany manerana an'izao tontolo izao. Tombony lehibe io. Satria afaka mahita radara manerana an'izao tontolo izao amin'ny fampiharana izahay. Fa koa, misaotra an'ireo mpampiasa izay maharaka hatrany. Azonao atao ny mahita raha misy radara vaovao amin'ny fotoana rehetra noho ny fampiharana. Izy io koa dia mitatitra momba lozam-pifamoivoizana na toe-javatra misy eo amin'ny fifamoivoizana tamin'ny fotoana.
Maimaimpoana ny fampidinana ny fampiharana amin'ny Android. Na dia izany aza, ao anaty no ahitantsika ny fividianana izay amin'ny tranga sasany dia mety ho lafo loatra. Ka izany no tena maharatsy an'ity fampiharana ity.
Coyote: fampitandremana amin'ny fakantsary hafainganam-pandeha, fanairana, GPS, fifamoivoizana
Developer: Vondron'olona Coyote
Fampiharana tsara izany miavaka indrindra ho an'ny vondrom-piarahamoniny. Satria araka ny asehon'ny anaran'ny fampiharana dia fampiharana ara-tsosialy tokoa izy io. Noho izany, noho ny mpampiasa, nomena ny vaovao momba ny lozam-pifamoivoizana, ny toe-javatra misy eo amin'ny fifamoivoizana, ny toro-hevitra, ny toro-hevitra ary mazava ho azy fa fakan-tsary hafainganana. Izany dia mahatonga azy io safidy tsara hafa hampiasaina hahitana raha misy radara amin'ny lalana iray.
Maimaimpoana ny fampidinana ny rindranasa Android. Na dia misy dokam-barotra ao anatiny aza.
Ity no safidinay amin'ireo rindranasa radara tsara indrindra. Manantena izahay fa hitanareo fa mahasoa azy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ny fampiharana fakantsary haingam-pandeha tsara indrindra ho an'ny Android
Ny Huawei Mate 10 sy Mate 10 Pro dia ho hita ao amin'ny Microsoft Store amin'ny volana febroary
HTC U11 EYEs: Ny afovoany vaovao an'ny orinasa Taiwanese